China motor yesigaba esine-asynchronous yokugaya itshe nokusika ifektri kanye nabaphakeli | Ukuhola
YXP uchungechunge ephezulu lokushisa umlilo ukulwa qeda fa ...
YEJ2 uchungechunge kagesi ukubopha isigaba ezintathu asynch ...
Isigaba esine-motor asynchronous sokugaya itshe i ...
IE3 uchungechunge ukusebenza kahle okuphezulu kakhulu isigaba sesithathu asynchr ...
IE2 uchungechunge kahle eliphezulu ezintathu-isigaba asynchronous ...
Isigaba esine-motor asynchronous sokugaya itshe nokusika
Izici zesigaba esine-motor asynchronous sokugaya nokusika itshe: ifreyimu encane, amandla aphezulu, ukusebenza kahle kokufaka uphawu, izinga lokuvikela eliphakeme, ukudlidliza kwezimoto eziphansi, umsindo ophansi, ukuqina nokuhamba,
Ukusebenza okubushelelezi, njll.
Ama-motors wezigaba ezintathu ezi-asynchronous zokugaya nokusika itshe luchungechunge lwensimbi
◎ Uzimele Cha.: 71-132
◎ Ukusebenza Indlela: S1
Class Isigaba Sokufaka: F
◎ Ukuvikelwa Izinga: IP56
Inethiwekhi yokuthengisa yeLijiu Motor isabalale yaya ezifundazweni nasemadolobheni angaphezu kwama-20 okubalwa kuwo iNortheast, Northwest, North, Central, South, Southwest and East China. Imikhiqizo ithunyelwa eYurophu, eMelika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe nezifunda.
ILijiu Motor igxile ekukhiqizeni, i-R & D nokuthengiswa kwama-motors ahlukahlukene. Imikhiqizo ifaka i-YE2, YE3, YB3, ama-motor tower tower, i-YD2, i-YEJ2, i-YVF2, i-YC / i-MC, i-YL nolunye uchungechunge lwama-motors we-asynchronous wesigaba sesithathu namanye ama-motors akhethekile ahlukahlukene. Umkhiqizo usebenzisa ukwakheka okujwayelekile kukazwelonke, futhi izinga lamandla nosayizi wokufaka lihambisana nezinga le-IEC le-International Electrotechnical Commission. Inezinzuzo zokusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla, i-torque ephezulu yokuqala, umsindo ophansi, ukudlidliza okuphansi nokwethenjelwa okuphezulu. Imikhiqizo isidlulile isitifiketi se-European Union's CE kanye nesitifiketi se-CCC ne-CQC saseChina. Le nkampani ithole isitifiketi sohlelo lwekhwalithi lomhlaba wonke le-ISO9001. ILijiu Motor izinikele ekuhlinzekeni izixazululo ezihamba phambili zabasebenzisi bezimboni namandla, ukwenza ngezifiso izinjini ezikhethekile.
Ukuqamba nobuqotho kuyinkambiso yami, ukuzivumelanisa nezimo nokuguquguquka kuyizinzuzo zethu. Sihlose ukuba ngummeleli we- "Made in China" emkhakheni wezimoto. Inkampani inamathela kwifilosofi yebhizinisi "yokuphatha ngobuqotho nokuwina ngekhwalithi". Ukuze sihlangabezane nezidingo zabathengisi basekhaya nabangaphandle, silwela ukwakha uphawu lwe- "Lijiu" futhi senze i- "Lijiu" idume ezweni lonke nasemhlabeni jikelele. Sebenzisa ubuqotho bethu nokuhlakanipha kwethu ukwenza ikusasa elingcono lihambisane nawe!
Langaphambilini Isigaba esine-motor asynchronous sepompo yepayipi
Olandelayo: I-asynchronous motor-selehlile ngamanzi isigaba sesithathu
IE1 uchungechunge lwesigaba esithathu se-asynchronous motor
Uchungechunge lwe-YVP lwesigaba sesithathu semotor asynchronous for ...